SAWIRRO: Guddoomiye Yariisow oo dhagax dhigay dhismaha laamiga isgoysyada Siinaay iyo Baar-Ayaan
Muqdisho (Horumar Online) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ahna Duqa Muqdisho, Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisoow) ayaa dhagax dhigay waddo laami ah oo isku xirta isgoosyada Siinaay iyo Baar-Ayaan ee degmooyinka Warta-nabadda iyo Yaaqshiid.
Guddoomiye Yariisow oo ka warbixiyey dadaalka Maamulka Gobolku ay ugu jiraan horumarinta caasimadda iyo dib u dhiska kaabeyaasha dhaqaalaha ayaa uga mahadceliyey bulshada degmooyinka Warta-nabada iyo Yaaqshiid sida ay kaalintooda uga qaadanayaan hirgelinta waddadan oo muhiim u ah isusocodka iyo ganacsiga degmooyinkaas.
Wuxuu kula dardaarmay Ingineerrada ku hawllan dhisidda waddadan in ay hirgeliyaan laami dhaxal gal ah oo adkeysi u leh biyaha roobka, isla markaasna lagula xisaabtamayo dhismaha jidadka oo ah hanti guud ah.
Sidoo kale, Guddoomiyeyaasha degmooyinka Warta-nabadda iyo Yaaqshiid ayaa bogaadiyey hirgelinta waddadan, iyagoona uga baaqay bulshada degmooyinkaas in ay la shaqeeyaan injineerrada hawshan wada, si is-xilqaan ahna ay uga qeyb qaataan hawlaha kale ee la xiriira bilicda iyo horumarinta.
Geesta kale, Duqa Muqdisho Eng Yariisow, ayaa u kuur galay xaaladda amni iyo ganacsi ee bulshada degmooyinkaas, isagoona qaar ka mid ah goobahaas kula kulmay dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Tags: #Baar Ayaan #Dhisme #Laami #Siinaay #Waddo #Yariisow
Previous Post AKHRI: RW Kheyre oo magacaabay guddiga qaban qaabada xuska toddobaadka xorriyadda Soomaaliya
Next Post DHAGEYSO: ”Shirqool ayaa lagu dilay Gaashaanle dhexe Cabdi Cali Seed”…